တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကပိုပိုပြီးလက်တွေ့နှိပ်နှင့်အတူ, အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဝင်ရောက်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိစျေးဝယ်ပင်အများဆုံး ardent ပြိုင်ဘက်တက် setting ။ ကြီးမားသောရွေးချယ်ခြင်း, တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများ, အမှုအရာကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်း, ဝယ်မယ့်တိုင်းပြည်အတွင်းပုံမှန်ရောင်းအား၌တွေ့ကြသည်မဟုတ်သည့် Analogues ။ ဤအမှု၌ AliExpress အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ၏အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ခြင်းနီးပါးမျှယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါတယ်။
ယနေ့အထိ, AliExpress အဖွဲ့ဝင်အများစုသူမကလာလျှင်, ကအားလုံးကိုတရားကြောင်းအကြံပြု, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမျှော်လင့်ချောထုပ်၏ခြင်္သေ့ရဲ့ရှယ်ယာပေးဆောင်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုဝယ်အွန်လိုင်းစတိုး (ဆို, မင့် AliExpress) ကပယ်ချခြင်းနှင့်ပေးပို့သူဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့အခြိနျမရှေးနိုငျရနျ, mail ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလက်ခံရရှိ၏ကြိုးသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ငါ AliExpress ပေါ်တွင်ခြေရာခံကှကျအရေအတွက်ကိုမည်သို့သိလား
ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဝယ်ယူမယ့်အခါ, AliExpress အပေါ်မိန့်ပြီးနောက်မှသာစောင့်ပါ။ သို့သျောလညျးကိုပင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအထူးခြေရာခံခြင်းန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤအချက်အလက်တစ်ဦးသည်ကိုယ်တိုင် AliEkspress ဝန်ဆောင်မှုနှင့် Third-party အရင်းအမြစ်များကိုအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအဘို့ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ကုဒ်ကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်။
ပလပ်စတစ်ဘဏ်ကတ်များ AliExpress အပါအဝင်များစွာသောအွန်လိုင်းစတိုးအတွက်ငွေပေးချေမှုများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငွေပေးချေ၏နည်းလမ်းသစ်ကိုဖြင့်အစားထိုးသောနောက်, ဤကဒ်များဟာသူတို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲရှိသည်မမေ့မလြော့ပါ။ သင့်ရဲ့ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခြိုးဖောကျ၏ strain ။ ဤအခြေအနေ၌, သင်ငွေပေးချေမှုအသစ်တစ်ခုအရင်းအမြစ်နှင့်ဖွဲ့သောသယံဇာတအပေါ်ကတ်အရေအတွက်အားပြောင်းလဲပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
AliExpress, ကံမကောင်း, ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်နှဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်မသာ။ ထိုအတက်ရင်အမိန့်, ရောင်းချသူနှင့်ငွေဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရန်တွေ့အကြောင်းကိုမသာပါပဲ။ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုအတွက်တဦးတည်းအလားအလာပြဿနာ - ကဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦး banal နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တိုင်းပြဿနာများအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။
အတော်လေးမကြာခဏကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများအလီစံရှာဖွေရေး tool များ၏ထိရောက်သောတည်နေရာအလုံအလောက်မရကြောင်းထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ အတွေ့အကြုံရှိဝယ်လက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ရှာဖွေရေးကူညီပေးနိုငျအဖြစ်, ဒီဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာငါသိ၏။ သို့သော်လူတိုင်းမကနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက် AliExpress အပေါ်ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေအဓိကနည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူ AliExpress သည့်အချိန်တွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့သင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူး function ကို Deactivate ပရိုဖိုင်းကိုလည်းမရှိ။ function ကိုတည်ရှိရာကအတော်လေးဝယ်လိုအားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအားလုံးအောင်မြင်စွာမတှေ့။ သတိပေးခြင်းအကျိုးဆက်များ AliExpress အပေါ်ပရိုဖိုင်းကို deactivation: အသုံးပြုသူများတစ်ဦးဝေးလံသောအကောင့်ကို အသုံးပြု. ရောင်းသူသို့မဟုတ်ဝယ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကံမကောင်းစွာပဲဖြစ်နိုင်သမျှ AliExpress ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အမိန့်များအားလုံးမဟုတ်အမှုပေါင်းလောဘဝယ်ယူပျော်မွေ့ရန်။ ဒုက္ခအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ် - ခြေရာခံကြသည်မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိကြသည်မဟုတ်, ဒါပေါ်မှာမသင့်လျော်ခြင်းနှင့်၏ပုံစံသို့ရောက်ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကနှာခေါင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် output ကိုတစ်ဦးတည်းသာ - ထိုဆွေးနွေးငြင်းခုံဖွင့်လှစ်ရန်။
AliExpress အမိန့်မှရိုးရိုး, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်လည်းနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများမိန့်၏လုပ်ငန်းစဉ်ငွေပေးငွေယူမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Multi-ခြေလှမ်းလုပ်လေ၏။ နောက်ပိုင်းမှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိခဲ့သည်နိုင်အောင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, သူတို့ကိုပေးထားရပါမည်။ အလီ၏ AliExpress အပေါ်ကုန်ပစ္စည်းအလို့ငှာလိမ်လည်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောအတိုင်းအတာရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အွန်လိုင်းစတိုး၏အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဝယ်ယူ၏ဒီဇိုင်းမှာထက်ကုန်စည်များ၏ရွေးချယ်ရေးအပေါ်အများကြီးပိုအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ သို့သော်မကြာခဏငွေပေးချေမှုဒါမှသာရှိသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် AliExpress ဖောက်သည်မဆိုနည်းလမ်းဖြင့်အလွယ်တကူဝယ်ယူမှုများလုပ်ကိုကူညီငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာရွေးချယ်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်နယ်ပယ်ကိုပေးသည်။
AliExpress အပေါ် password recovery
ဒါဟာမကြာခဏကလူနံပါတ်များ, အက္ခရာများနှင့်သင်္ကေတများမဆိုပေါင်းစပ်အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမပင်အရေးကြီးဆုံးအရာတွေအကြောင်းမေ့လျော့နိုင်မတွေ့ကြုံတတ်၏။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် AliExpress အပေါ်မေ့လျော့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲသောသူတို့အဘို့တစ် password recovery procedure ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအများစုကိစ္စများတွင်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သမျှအရှုံးသင့်အကောင့်မှအကျိုးရှိစွာသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
AliExpress အပေါ်ဝယ်ယူကုန်ပစ္စည်းများလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကိုစေလွှတ်နေကြသည်။ ဖြန့်ဝေလက်ျာအရပ်မှတိုက်ရိုက်နှစ်ဦးစလုံးအနီးဆုံးစာတိုက်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဆက်သားမှာအရပျယူနိုငျ - ကဖောက်သည်တွေနဲ့သဘောတူညီချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်နေရာရာတခြားမသွားဘဲဟာမှာပါတဲ့ကှကျဖို့လိပ်စာဒေတာဖြည့်စွက်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
AliExpress အပေါ် track အမိန့်
ကုန်စည်များ၏ဝယ်ယူအောက်ပါအလီဟာအလွန်ရှည်လျားပြီးခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည် - ပို့ဆောင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်။ သူမ၏အချိန်ကိုက်လွှဲပြောင်းအကွာအဝေးပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။ သေချာပါစေခြင်းငှါ, ချောင်းမြောင်းတကယ်မျက်ခြေမပြတ်သည်ခရီးအလိုရှိသောထုတ်ကုန်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အတော်များများကရောင်းသူခြေရာခံခြင်းကုန်ပစ္စည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအေဂျင်စီများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။